Apo pasi rose riri kucherehedza zuva rehutongi hwegutsaruzhinji pasi rose, kana kuti International Day of Democracy, vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira Zimbabwe kuti iremekedze nemazvo hutongo hwegutsaruzhinji.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvellous Mhlanga, vanoti hurumende iri kundikana kusimudzira hutongi hwegutsaruzhinji munyika pakatariswa maitiro ehurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
VaKhumalo vatiwo kutadza kuitwa kwesarudzo munyika nepamusana pechikonzero cheCovid-19 munongedzo mukuru wekushaikwa kwehutongo hwegutsaruzhinji.
VaKhumalo vatiwo Crisis in Zimbabwe Coalition yakatonyorera SADC ichitsutsumwa nematambudziko ari munyika. Vatiwo sangano ravo rinoda kuti SADC ipindire pane zviri kunetsa muZimbabwe kuitira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinobata vanhu vese munyika.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Association of Youth Organisations, VaMcDonald Munyoro, vatiwo hutongi hwegutsaruzhinji hunogoneka chete kana masimba adzorerwa kune veruzhinji.
Mumwe mugari wemuHarare, VaPride Mukono, vatiwo kuvana veZimbabwe hapana chekupemberera pazuva ranhasi. Asi vatiwo zuva ranhasi rinopa vana veZimbabwe mukana wekuita hurukuro dzekuti nyika ingasvike sei pakuve nehutongi hwejekerere.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvezuva ranhasi kanawo pamusoro pemashoko ataurwa nevanorwira kodzevanhu dzevanhu.
Asimukuru wezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vati hurumende yaVaMnangagwa iri kufamba mugwara, uye bato reZanu PF ndozvarakarwira zvegutsaruzhinji muhondo yerusununguko.
United Nations yakaita chisungo musi wa Mbudzi 8 2007 chekuti zuva reInternational Democracy Day richerechedzwa gore rega rega musi 15 Gunyana.